မျက်ဝန်းအလှ ပိုမိုတောက်ပအောင် ဒီလိုလေးတွေလုပ် | Duwun
မျက်ဝန်းလေးတွေက အရှိထက် ပိုမိုဝိုင်းနေသယောင် ဖြစ်ချင်တယ်ဆို လိုင်နာအဖြူကိုသုံးပါ။
မျက်လုံးတစ်စုံဟာ နှလုံးသားရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေပါလို့ ညွှန်းဆိုကြတယ်မို့လား။ ဒီလိုမျိုး အရေးပါတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေဟာ ကျန်းမာတဲ့အသွင်နဲ့ လင်းလက်တောက်ပနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်ဝန်းအလှကို ပိုမိုသက်ဝင်သွားဖို့ရာ ဒီအချက်တွေက ကူညီပေးမှာ အသေအချာပါပဲနော်။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး...။
ညက သောက်မိလို့ ၊ အိပ်ရေးမဝခဲ့လို့ မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာနိုးတဲ့အခါ မျက်လုံးတွေ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်? မှန်ထဲပြေးကြည့်လိုက်တော့ မျက်အိတ်တွေကလည်း တွဲကျနေပြီ။ ဘာလုပ်ကြမလဲ? ရေခဲတုံးလေးကို အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီး မျက်လုံးမှာကပ်ထားပေးလိုက်။ ခဏနေဆိုရင် မျက်အိတ်တွဲတာတွေ မရှိတော့ဘူး။
သင်အကြိုက်တွေ့မယ့်ဆောင်းပါး ---> ဇွန်းနဲ့ မျက်လုံးအလှပြင်နည်း ( ၄ ) ခု
မျက်တောင်ကော့ဆေးကို ပိုပြီး ကြာကြာခံစေမယ့်နည်းကို ပြောမလို့လေ။ ဇွန်းတစ်ချောင်းကိုယူပြီး ရေနွေးထဲစိမ်လိုက်ပါ။ အဝတ်သန့်သန့်နဲ့ ခြောက်အောင်သုတ်ပြီးရင် မျက်တောင်အဖျားတွေကို ဇွန်းနဲ့ကပ်ပြီး လက်လေးနဲ့ အသာအယာဖိလိုက်ရင် မျက်တောင်လေးတွေ ကွေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်။ သတိထားရမှာတစ်ခုက ဇွန်းသန့်ဖို့ရယ် ရေနွေးထဲမှာ အရမ်းပူခြစ်သွားအောင် မစိမ်မိဖို့ရယ်ပါပဲ။
၃။ မျက်ဝန်းလေး ကျယ်သလိုဖြစ်ချင်ရင်
မျက်ဝန်းလေးတွေက အရှိထက် ပိုမိုဝိုင်းနေသယောင် ဖြစ်ချင်တယ်ဆို လိုင်နာအဖြူကိုသုံးပါ။ မျက်ခမ်းအစပ် အတွင်းလိုင်းမှာ လိုင်နာခဲတံအဖြူလေးနဲ့ ဆွဲလိုက်ရင် မျက်လုံးပိုဝိုင်းတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ အပေါ်မျက်ခွံမှာတော့ အိုင်းလိုင်နာအနက်လေးကို လိုသလိုဆွဲပေးလိုက်ပေါ့။
ဒါကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်နော်။ မျက်တောင်ကော့ဆေးဖြစ်စေ၊ အိုင်းလိုင်နာဖြစ်စေ၊ အိုင်းရှဲဒိုးဖြစ်စေ တစ်ခုခုကို အပြာရောင်သုံးကြည့်ပါ။ မျက်ဝန်းလေးတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို လင်းလက်တောက်ပလာပြီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူကတော့ ကြွေဆင်းသွားမှာပါပဲ။